ခံစားမိသမျှချရေးဖြစ်တယ်။ ရင်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းဘဲလေ.....
ရက်တွေလဲ ကြာလာပြီ နင်နဲ့ငါ ချစ်ခဲ့တာ
နင့်အပေါ် အချစ်တွေလဲ ခန်းလာပြီ
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကို မြန်မြန် အဆက်ဖြတ်ပေးပါ။
Posted by GHOSTBELL at 13:390comments
နင့်ရဲ့နူးညံ့တဲ့ ဆံစလေးတွေကို ငါလွမ်းမိတိုင်း
နင့်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးတွေကို သတိရတိုင်း
ငါ့ကိုပြန်ပြုံးပြတတ်တဲ့ ကောင်မလေးနား ရောက်ခဲ့တယ်။
နင့်ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံကို တမ်းတမိတော့
ကောင်မလေးရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်မိတယ်။
ငါ့နားမှာ နင်မရှိလို. မဖြစ်ဘူးလေ။
Posted by GHOSTBELL at 13:25 1 comments
ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘ၀ဆိုတာ ဘတ်စ်ကားနောက်ဘီးပေါ်က ထိုင်ခုံကြီးလိုပါဘဲ။ ထိုင်ရတာ ခြေထောက်၂ချောင်း ဘယ်ထားရမှန်းမသိအောင် ကိုးလိုးကန့်လန့်နိုင်သလောက်၊ မြေပြင်က အဖုအထစ်တချို.ကို ကားဘီးကနင်းမိတာနဲ့ ထိုင်နေရင်း မြောက်တတ်သွားတာမျိုးလဲ ရှိရဲ့။ ကားကအဲကွန်းလေးအရှိန်နဲ့ငိုက်မြည်းရင်း၊ အိတ်ဆောင် MP3 Playerလေးနဲ့ချိုမြိန်တဲ့ သံစဉ်လေးတွေနားထောင်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ခက်ခဲမှုအရာအားလုံးကို မေ့ထားနိုင်တယ်လေ။
Posted by GHOSTBELL at 13:170comments
Posted by GHOSTBELL at 09:590comments
သော့ခတ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ ဖြေမယ့်အချိန် စောင့်ရေတယ်
Posted by GHOSTBELL at 02:302comments
ပူပြင်းလှတဲ့ သဲသောင်ပြင်မှာ ကုန်တင်ကားအစုတ်ကြီးကို ပင်ပန်းကြီးစွာ စီးနင်းလိုက်ပါရင်း၊ ရုတ်တရက် လမ်းဘေးကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဘုရား၊ ဘုရား..... လူလို့အမည်သညာတစ်ခုသာပေးနိုင်တော့သော လူမပီသ၊ လူရုပ်မပေါက်တော့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်။ သေမင်းကခေါ်မယ့်အချိန်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်က လင်းတငှက်က စောင့်ဆိုင်းပြောပြနေတာ နားထောင်နေရသလိုဘဲ။ အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ။
ချက်ချင်း စီးလာတဲ့ကားကို ရပ်ခိုင်းပြီး ကလေးငယ်ဆီ အပြေးသွားမိတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ဘာမှမရှိတဲ့ မျက်တွင်းဟောက်ပက်တစ်စုံက သွေးတွေလူးနေတဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်နေရှာတယ်။ ကလေးငယ်ကို ရုတ်တရက် ပွေ.ချီလိုက်တော့ ကော်ပက်ရုပ်တစ်ရုပ်ထက်တောင် ပေါ့ပါးပြီး အေးစက်ဖျော့တော့နေလေရဲ့။
ရုတ်တရက် ဂျစ်ကား၃စီး သေနတ်တွေတရပ်စပ်ပစ်လို.၊ သူတို.ပစ်နေတာ လူတွေဆိုတာရော သိရဲ့လားမသိ။ သေနတ်တွေပစ်နေတုန်းက ကြောက်လန်.တကြားပြေးလွှားနေတဲ့ လူတွေက ဆန်အိတ်တွေလဲတွေ.ရော သေမှာလဲ မကြောက်တော့ဘဲ သေနတ်သမားတွေကို ပြန်ခုခံရင်း၊ အစာလုပွဲတွေ စတော့တာပါဘဲ။
Angelina Jolie ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပါ။ ရုပ်ရှင်နာမည်လဲမသိပါဘူး။ ဖြတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စလေးပါဘဲ။ ရင်ထဲကို လာထိတယ်။ ဆက်မကြည့်ရက်နိုင်အောင် ဖြစ်လာတယ်။ လောကကြီးမှာ ဒီလိုမညီမျှမှုတွေ ဘယ်တော့များမှ အဆုံးသတ်မှာလဲ။
Posted by GHOSTBELL at 00:380comments
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကူးပါ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တို.ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သင်္ကြန်အတုလေးတစ်ခု ဖန်တီးပြီး နှစ်သစ်ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ငါ့ကို အားပြုလမ်းလျောက် ရောက်အောင်သွားတတ်တဲ့
........နဲ့ ဆုံဆည်းနေကျ အချိန်တချို.
နှစ်သစ်ကို ဘာနဲ့မှ အစားထိုးမရခဲ့ဘူး။
Posted by GHOSTBELL at 05:232comments
ကောင်မလေးတွေအားလုံးကို ချစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။
Angel's 3Piece! - Episode 12 - Can't Help but Love the Music
Htwe Zarli Ei
Articles from video.PhpMyanmar.com